Ibsa Ejjannoo Miseensota ABO Washington DC - OPride.com
Nuti miseensonni ABO Washington, DC fi naannootti argamnu Guyyaa Yaadannoo Gootoota Oromoo tokkummaadhaan kabajuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan dhaamsa fi ergaa uummati Oromoo ayyaana kana irratti hirmaatan nuu dabarsan irratti hundoofnee, waadaa Oromummaa jabeessuu fi dirqama waa hunda dura dantaa uummata Oromoo dursuu nu irra jiru ilaalcha keessa galchuudhaan ibsa ejjennoo armaan gadii baafannee jirra.
Waggoota kurnan lamaan darbe keessa diigumsa ABO keessatti dhalateef furmaati gama maanguddootaan yaalamaa ture fedhii uummata Oromootiin alatti sababaa xixiqoodhaan hanga ammaa danqamee jira. Nuti miseensonni ABO Washington DC qabxii siyaasaa xixiqqoo wal irratti galmeessuun bu’aa akka hin qabne hubannee, araaraa fi tokkummaa ABO jalaa ol ijaaruu yaada jedhu fudhachuudhaan fedhii keenyaan walitti dhufnee guyyaa goototaa kan bara 2011 wajjin kabajuu dandenyee jirra. Miseensonni walitti dhufnee kun, Guyyaa Gotootaa ayyaanefachuuf kophaa osoo hin tahin, hanga mooraan qabsoo ABO deebi’ee tokkoomuu fi mooraan qabsoo Oromoo waliigala ititee jaaramutti waliin dhabbannee aarsaa barbaachisu mara kafaluuf murteeffannee jirra.
Hojii maangudootni itti dhama’aa turan akka firii godhatu fi mooraan qabsoo Oromoo akka tokkoomuuf, nuti miseensonni ABO nannoo DC jiraannu hojii isaanii duukaa buunee ABO tokkomsuuf gayee nurraa ergamu ni baana.
Nuti miseensonni ABO DC , hanga tokkummaan ABO mirkanaawutti , garee tokkichaafuu osoo hin baabsin gara mooraa ABO tokko tahutti jabaannee irratti hojjachuuf murteeffanne.
Yaada adda addaa keessumeessuu, wal-hubachuu fi wal-danda’uun gaaffii belbeltuu yeroo kan namuu itti yaaduu qabu tahuu ni hubanna. Nuti miseensonni ABO naannoo DC gama keenyaan ofii yaada kana irratti hojjachuu qofaa osoo hin taane, kana booda dandeettii, humnii fi qabeenyi Oromoo hundi gama diinaa akka fuuleffatuu fi dantaa uummata Oromoo dursuu irratti xiyyeefachuudhaan boqonnaa haarayatti akka tarkaanannu Oromoota maraaf yaamicha goona.
Mooraa qabsaawoota deebisanii ijaaruu fi ABO tokkoomsuun gaaffii uummata Oromoo kan filmaata biraa hin qabne tahuun mirkana. Kanaaf iyyuu miseensonni ABO bakka jirtan maratti yaada kana hundee godhattanii, garee keessa jirtaniif baabsuu irraa of qusachuudhaan kayyoo kanarratti akka qooda fudhatan waamicha jaalumaa fi lamumaa isinii goona.
Miseensota ABO Washington DC
Caamsaa, 8 2011